Application – AsiaApps
October 31, 2018 October 31, 2018 WaziynApp News / ReviewsNo Comment on သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစေမယ့် 100 GB Free – Degoo Cloud Drive
ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ၊ဓာတ်ပုံနဲ့ video တွေကို ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနဲ့ memory device တွေအပြင်အခြားနည်းနဲ့သိမ်းလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအခြားနည်းကတော့ Cloud တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google နဲ့ ဖုန်းကုမ္မဏီတွေအပြင်အခြား cloud service ကုမ္မဏီ တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကုမ္မဏီတွေက ဒေတာအမြောက်အများဆံ့တဲ့…
Play Store က အခပေး App တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်း ရနိုင်မယ့် Aptoide
October 30, 2018 minn2unReviews / Smartphone NewsNo Comment on Play Store က အခပေး App တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်း ရနိုင်မယ့် Aptoide
Google Play Store မှာ အခမဲ့ရတဲ့ App တွေရှိသလို အခပေးပြီးမှ ဒေါင်းခွင့်ရှိတဲ့ App တွေလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ E-payment ကို အကောင်အထည် ဖော်နေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် Play Store…
Messenger အတွက် unsend feature ကို စမ်းသပ်နေတဲ့ Facebook
October 15, 2018 October 15, 2018 MoonFeatures / Smartphone NewsNo Comment on Messenger အတွက် unsend feature ကို စမ်းသပ်နေတဲ့ Facebook
အခုနှစ် အစောပိုင်းတုန်းက Facebook ရဲ့ စီအီးအို Mark Zuckerberg က messenger မှာ ပို့ထားတဲ့ message တွေကို ကုမ္ပဏီဘက်က တိတ်တဆိတ် delete လုပ်ခဲ့တယ်လို့ Facebook မှ ထုတ်ဖော်…
Messanger chat ရဲ့ Group မှာ အဖွဲ့ဝင် အယောက် ၂၅၀ အထိ ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ Facebook
October 12, 2018 October 15, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Messanger chat ရဲ့ Group မှာ အဖွဲ့ဝင် အယောက် ၂၅၀ အထိ ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ Facebook
လူအများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook ရဲ့ Messenger group ထဲမှာ member အရေအတွက် ကို အယောက်၂၅၀ အထိ ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေဖြစ်တဲ့ book club…
တစ်ကမ္ဘာလုံးက Gamer တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Discord App
October 12, 2018 minn2unApp NewsNo Comment on တစ်ကမ္ဘာလုံးက Gamer တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Discord App
Internet ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း Online Forum တွေဟာ အပြင်မှာလုပ်ဖြစ်တဲ့ Forum တွေထက် ပိုပြီး သတင်းပေးပို့ရယူမှုမြန်တဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ Online Forum တွေဖွဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့မှုတွေ၊ စစ်တမ်းကောက်တာတွေ၊ သုံးစွဲသူ…
Gif တွေကိုအသံတွေထည့်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ TuneMoji – Sound GIFs!
January 5, 2018 WilliamReviewsNo Comment on Gif တွေကိုအသံတွေထည့်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ TuneMoji – Sound GIFs!
ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ GIFs (Graphics Interchange Format) ဇာတ်ကောင်တွေကို Animated လုပ်ထားပြီးအသံမပါတဲ့ format တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် အသံမပါတာကြောင့် တစ်ခုခုလိုအပ်နေသလို ခံစားရမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ အခုတော့အဲ့ဒီ Feeling ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် Emoticast ကနေ…
ရက်၃၀ အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေဖယ်ရှားပေးမယ့် Lose Weight in 30 days
January 5, 2018 January 5, 2018 MoonReviewsNo Comment on ရက်၃၀ အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေဖယ်ရှားပေးမယ့် Lose Weight in 30 days
၂၀၁၇ မှာ Google Play ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုရရှိသွားတဲ့ application တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ Weight ချတဲ့ application တွေအများကြီးထဲကမှ သင့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မယ့် application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ စနစ်ကျတဲ့…
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးကို ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ MiniSynth2
December 29, 2017 December 29, 2017 MoonReviewsNo Comment on အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးကို ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ MiniSynth2
iOS synthesizer application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MiniSynth2 ဟာ အကောင်းဆုံးအဆင့်သက်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ rating ၅ ကို ရရှိသွားပါပြီ။ Synthesizer ဆိုတာက အသံမျိုးစုံပေါင်းစပ် ဖန်တီး နိုင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် တူရိယာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။…
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို သင့်ဖုန်းထဲကို ရောက်လာစေမယ့် Living Earth – Clock and Weather
December 28, 2017 December 28, 2017 MoonReviewsNo Comment on ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို သင့်ဖုန်းထဲကို ရောက်လာစေမယ့် Living Earth – Clock and Weather
“ကမ္ဘာကြီးက သေးသေးလေးပါ”ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးကြမှာပါနော်။ အခုတော့ ကမ္ဘာကြီးက သေးရုံတင် မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ သင့်ရဲ့ Smart Phone ထဲ ကိုပါရောက်လာတော့ မှာပါ။ Living Earth application ကသင့်ကို ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့…
လှပတဲ့ သီချင်းတွေကို အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်မယ့် Spire Multitrack Recorder
December 28, 2017 December 28, 2017 MoonReviewsNo Comment on လှပတဲ့ သီချင်းတွေကို အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်မယ့် Spire Multitrack Recorder
Spire Multitrack Recorder က သာမန် သင်တွေ့နေကျ recorder တွေနဲ့ လုံးဝကို ကွဲပြားတဲ့ application ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ studio မရှိပဲ သင့်အတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေဖန်တီးပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်…